Mụọ na nnukwu igwe coal nkedo site na usoro epc
Ihe nkedo EPC na-ezo aka na usoro nke ihe nlereanya ahụ na-epupụta wee pụọ. Ihe nlereanya ebe a na-ezo aka na ebu a na-eji na nkedo, nke a na-akpọ nkedo EPC. Ihe nkedo aja nkịtị bụ ịwụsa mmiri igwe n'ime ụdị ihe a kapịrị ọnụ wee wepụ ihe ebu ahụ mgbe mmiri igwe na-akpụ ka ọ bụrụ nke achọrọ ...
Ngwongwo nodular, dị ka ụdị ihe nkedo ígwè dị elu nke nwere ihe dị nso na ígwè, nwere uru nke ọnụ ahịa nrụpụta dị ala, ezigbo ductility, ike ike ọgwụgwụ dị mma ma na-eyi nguzogide, na ihe ndị dị mma na-arụ ọrụ A na-eji ya eme ihe na akwa igwe, valve valve. , crankshaft,...
Ihe nkedo shei bụ iji ájá kpuchie dị ka akụrụngwa, ebu a na-ekpo ọkụ na okpomọkụ ụfọdụ, site na agbapụ ájá, ihe mkpuchi iji mee ka ájá siri ike, ịkpụzi, na-akpụ ụfọdụ ọkpụrụkpụ nke shei ahụ, nke elu na nke ala na-ejikọta ọnụ. ihe nkedo, na-akpụ a zuru ezu ...
1 Ọganihu nke ntụpọ ntinye slag na nkedo ígwè na epc Ọ na-esiri ike ịmepụta ihe nkedo ígwè na ihe efu efu. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-eyi uwe, na-eguzogide okpomọkụ na ihe nkedo na-eguzogide corrosion na-enweghị nhazi ma ọ bụ obere nhazi, ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị mkpa c ...
Usoro nhazi nke nsonye ntụpọ na nkedo epc
1 Mmejọ nsonye na nkedo epc gụnyere ntụpọ na nkedo epc bụ ihe a na-ahụkarị. Mmejọ nsonye na nkedo epc na-ebelatakarị njirimara nke nkedo. N'otu oge ahụ, n'ihi ọdịdị nke nsonye na-adịghị ahụkebe, ọ nwere ike ịkpata mgbawa ma ọ bụ ọbụna mgbawa na nkedo n'oge ọrụ ...
Nnyocha na nyocha ọnụ ahịa mmepụta na ịchịkwa nkedo itinye ego
Mmepụta nkedo itinye ego na-agụnye usoro anọ: nkwadebe modul, nkwadebe shei, agbaze alloy na nkedo mgbe ọgwụgwọ gasịrị. N'ihi na usoro usoro abụghị naanị dị iche iche usoro, ngwaahịa eruba Complex, ogologo mmepụta okirikiri, na nkedo usoro bụ nnọọ ọkachamara. Nke...
Mmetụta nke latex na-acha ọcha na silica sol compound binder na njirimara nke mkpuchi ihe nkedo furu efu maka ígwè nkedo.
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke China, ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa iji nye ihe nkedo dị elu na nkenke maka ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ, kamakwa iji nweta mpaghara ihe onwunwe, obere ume ike, mmetọ dị ala, ma nweta ọganihu na-adịgide adịgide. Lee...
A na-eji usoro EPC emepụta ihe nkedo carbon ígwè dị elu
EPC nwere àgwà nkedo dị mma yana ọnụ ala dị ala. Ihe adịghị oke, nha kwesịrị ekwesị; Ogologo akụkụ dị elu, elu dị larịị; Obere ntụpọ n'ime, anụ ahụ dị oke; Enwere ike ime ya n'ọtụtụ buru ibu, mmepụta oke; Ọ nwere ike melite gburugburu ebe ọrụ, belata ike ọrụ ...
Omume ngwa nke akụrụngwa zuru oke nke ebu efu
site admin na 21-07-06
1 Ntinye usoro nke usoro mmepụta EPC teknụzụ EPC bụ isi na akụrụngwa bụ nkwa. (1) Ọrụ nyocha nke mbụ A na-ekewa ọrụ nyocha mbụ n'ime akụkụ abụọ: nke mbụ, ịghọta ihe ọmụma banyere EPC site na Ịntanetị na akwụkwọ ọkachamara; Ihe...
Nhazi nhazi nke nnukwu usoro nkedo ígwè ductile
site admin na 21-06-11
1 Nkedo ntụpọ nke nnukwu ductile ígwè akụkụ Shrinkage oghere, shrinkage porosity, slag nsonye, ​​ikuku oghere, peeling, deformation na na bụ nkịtị nkedo ntụpọ na ájá nkedo nke nnukwu ductile ígwè. Ihe ndị a na-emetụtakarị ntụpọ nkedo a na-ahụkarị. Maka ezigbo du...
Usoro na mgbochi nke carbon na-abawanye n'elu igwe nkedo anwụ furu efu
site admin na 21-06-04
Mkpuchi nkedo nchara nchara nke EPC na-abụkarị isiokwu na-ese okwu. Emeela ọtụtụ nnwale maka ma EPC dabara maka imepụta ihe nkedo nchara, ọkachasị ihe nkedo ígwè carbon dị ala. (1) ihe na usoro nke carburization elu carburization ...
Ngwa nke teknụzụ prototyping ngwa ngwa na ntinye nkedo ziri ezi
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, site n'iji nwayọọ nwayọọ na-emewanyewanye usoro akụ na ụba ahịa nke China na ọganihu ngwa ngwa nke ike zuru oke nke mba ahụ, ikuku ikuku na nchekwa mba na sayensị na nkà na ụzụ malitere ịghọ ụlọ ọrụ mmepe obodo. Nchọgharị oghere, mba d...
© Nwebiisinka - 2010-2019 : Ikike niile echekwabara.